सीमा विवादको विषय सडके राष्ट्रवादको मुद्धा होइन | नेपाल दर्शन
नेपालको सीमाना सम्बन्धी केही महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु
१, नेपाल -भारत सिमा दुरी १८८० किलोमिटर (जम्मा जिल्ला संख्या २६), जसमा ६४७ किलोमिटर सीमाना नदीले निर्धारण गरेको छ ।
२, नेपाल -चिन सिमा दुरी १४३९ किलोमिटर (जम्मा जिल्ला संख्या १५), जसमा ७४ किलोमिटर सीमाना नदीले निर्धारण गरेको छ ।
३, नेपाल भारतका विच भएका सिमा खम्बा (जंगे पिल्लर) हरुको संख्या ८५५३ छन, जसमध्ये ९१६ ओटा मुख्य सीमास्तम्भ हुन भने ७६३७ ओटा सहायक सीमास्तम्भ हुन ।
४, नेपाल चिनका विच भएका जम्मा सीमा खम्बाहरुको संख्या ९९ छन जसमध्ये ७९ ओटा मुख्य सीमास्तम्भ हुन भने २० ओटा सहायक सीमास्तम्भ रहेका छन ।
५, भारततर्फका सीमास्तम्भहरुका सम्बन्धमा ९१६ खम्बाहरु अंग्रेजकै पालामा बनाइयो र ४३६० खम्बा जमिनमा पछि बनाई ३२७७ सहायक स्तम्भहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन । निमार्ण गर्न बाँकी आधाजस्तो ९१६३८ ओटा खम्बाहरु विभिन्न नदी तथा खोलामा पर्ने भएकाले स्तम्भ निमार्ण हुन सकेन । निमार्ण भइसकेका ४३६० सीमाखम्बाहरुमध्ये पनि ४९९ खम्बा हाल खोलाले बगाएको अवस्थामा छन । अधिकांश जिर्ण भइसकेका र मर्मतको पर्खाइमा छन ।
६, चिनतर्फ नेपालको अधिकांश सीमानाहरु हिमश्रृंखला, भन्ञाङ, द्यौराली र हिमचुचुरोहरु पर्ने हुनाले भारतको तुलनामा थोरै संख्यामा मात्र सीमा खम्बाहरु रहेका छन । वि.स २०६५ ( ६६ मा मर्मत गरी सम्पन्न भएका हुनाले खासै मर्मत गर्नुपर्ने र हराइएको अवस्थामा छैनन ।
७, विसं २०१८ १९ मा नेपाल र चिनविच सिमांकन भएको थियो । सीमांकन गर्ने सिलसिलामा परम्परागत तवरले खोला, नदी, जग्गाको भोगचलन, आवाद आदिलाई मान्यता दिई गर्दा २१३९ वर्गकिलोमिटर चिनकोभुभाग नेपालतर्फ पर्न आयो भने १८३६.२५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भुभाग चिनतर्फ पर्न गयो ।
८, नेपाल र भारतविच जम्मा सीमाविवाद ७१ स्थानमा छन, जसमध्ये कालापानी ३७००० हेक्टर सबैभन्दा ठुलो सीमाविवाद हो । पुरानो मध्ये एक पनि हो ।
९, भारतसित सीमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २४ जिल्लामा (वैतडी र डडेलधुरा वाहेक) सीमाविवाद छ ।
१०, भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाह नेहरुको भनाइमा भारतको उत्तरी सीमाना हिमालय सम्म भन्ने थियो । उनले संसदमै यो आशयको भासण समेत गरेका थिए । तत्कालीन भारतिय गृहमन्त्री सरदार बल्लव भाई पटेल पनी प्रशाशनीक तथा राजनैतिक दुवै आधारमा नेपाल, भुटान र आसाम आदिलाई भारतिय नक्साभित्रै कायम गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्दथे । यो कुराको स्पष्ट प्रमाण ७ नोभेम्वर १९५० मा पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यसै कुरालाई सम्पन्न गर्न, सन १०९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भयो, आसाम पहिलेनै भारतको राज्य घोषणा भयो भने नेपालमा विभिन्न तरहले कार्य गर्दै आएको छ ।
११, बुदा १० मा भनिएझै भारतले नेपाललाई नियन्त्रण गर्नका लागी मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालको हिमाली क्षेत्रका १९ स्थानमा भारतिय सैनि चेकपोष्ट राखिएको थियो । पछि राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थामा पटक पटक गरी विसं २०२७ साल असारबाट सबै चेकपोष्टहरु हटाइए । नेपालमा भारतिय सैनिक पल्टन तालिम गर्ने भनि नेपाल आएको र पछि गौचर हवाई मैदानको स्तरोन्नतीका लागी आएको सैनिकहरु भारततिर नफर्की हिमाली चेकपोष्ट तिर लागे भनिन्छ ।
११, कालापानी सीमाविवादको सम्बन्धमा
सन १९६२ मा भरत र चिनविच भएको युद्धमा भारतिय सैनिक चिनसंग हार हुदै पिछी हटदै आउँदा रणनैतिक हिसावले कालापानी क्षेत्र महत्वपुर्ण भएको हुदा भारतिय सैनिकले अड्डा जमाई वसेका थिए । हालसम्म त्यो स्थानबाट भारतिय सेना हटेका छैनन भने, सो समयदेखी भारतिय पक्षले कालापानी आफ्नो भनि गर्नाले सिमाविवाद भएको हो । भारतिय सैनिक विधिवत रुपमा कालापानीमा बसेको विसं २०१९ साल मंसिर ११ गतेदेखी हो ।
-कालापानीमा सिमाविवाद हुनुभन्दा अगाडी नेपालसरकारले त्यहाका जनताहरुको जनगणना गराएको थियो ।
-कालापानीमा भारतिय सैनिकहरु बसिरहेकै समयमा पनि त्यहाँका जनताले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई नै जग्गाहरुको मालपोत बुझादै आएका छन । पछिल्लो समय भारतले यो पनि रोक्दै आएको छ ।
-कालापानीको कृत्रिम समस्या हो । जसको कुनै आधारमा पनि विवाद देदिदैन । केवल नेपाली सरोकारवाला र नेताहरुमा अध्ययन र देशभक्तिको अभाव मात्र हो ।
-कुनै पनि देशको सीमाना यदी नदिबाट सीमांकन गरिएको हुन्छ भने उक्त नदिको सबैभन्दा ठुलो मुहानलाई मुल मानिन्छ । यसकारण महाकाली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो ।
-भारतले महाकाली नदिको मुहान कालीको मन्दिर छेउ भई बग्ने सानो तुरतुरे पानीको धारलाई मान्दै आएको छ । मन्दिर पनि पछि भारतिय सेनाले बनाएको र पानीको मुहान पनि एकतर्फी ढंगले भारतले मानेको छ । नेपालको यसमा सहमत हुदैन ।
-कालापानी र राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था विचको सम्बन्धका बारेमा भएको सत्यता यसप्रकार छ :- नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा भएका १८ ओटा भारतिय चेकपोष्ट अटाइसकेपछि कालापानीको प्रशंग उठेको थियो । जसको प्रत्युत्तरमा महेन्द्रले “चेक पोष्ट हटाउँदा भारत निकै रुष्ट भइसकेको छ, केहि समय पर्खनु नै उत्तम हुन्छ “ भनि ठानि कालापानीमा महेन्द्रले कदम चालेनन । यसको मतलव वेचेको होइन । यदी बेचेको हुन्थ्यो भने त्यहाँका जनताले नेपाललाई मालपोत किन बुझाउथे ? अनि देशको भुभाग बेचेको जस्तो कुराको लिखित सम्झौता वा सन्धीपत्र खोई? कांग्रेश सरकारले हिमाली क्षेत्रमा राखेको भारतिय चेकपोष्ट हटाउन पनि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको ७-१० वर्षपछि मात्र हटाउन सक्यो भने कालापानीको लागी केहि समय अवश्य लाग्ने कुरामा सहमत हुनैपर्छ ।
-अर्को महत्वपुर्ण कुरा के भने नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरुभएको विंसं २०१७ साल पुस १ गतेबाट हो, तर भारतिय सैनिक कालापानीमा बसेको विसं २०१९ मसिंर ११ गतेदेखि हो । घटनाक्रमबाटै प्रष्ट हुन्छ कि महेन्द्रले कालापानी बुझाएर भारतसंग पञ्चायती व्यवस्था किनेको भन्नेकुरा पुर्ण रुपमा हास्यास्पद नै छ ।
-यदी भारतलाई कालापानी बुझाएर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएको हुन्थ्यो भने त्यही भारत पञ्चायतको बिरुद्धमा किन उत्रन्थ्यो ? भारतकै सहयोगमा बहुदलीय व्यवस्था किन आउथ्यो ? र राजा महेन्द्रको असामयीक निधनलाई पनि मध्यनजर गर्नै पर्छ । हिमाली क्षेत्रमा भएका भारतिय चेकपोष्ट हटाउने राजा महेन्द्र, नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भारतिय सल्लाहकार हटाउने र नेपालको हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको भारातिय दादागिरी हटाउने राजाले कालापानी भारतलाई बुझए भन्नु कुन तहको नैतिकता हो ? राजाले केहि समय पर्ख, अहिले भारत पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ र नेपालबाट भारत रुष्ट भइरहेको अवस्थामा कालापानीमा तत्कालै कदम चाल्नु जायज नहुने तर भविष्यमा गर्नुपर्छ भन्नेकुरालाई कुन अर्थमा बेचेको देखियो ?
-पछिल्लो समय कालापानीको विषय सन २०१५ मा भारत र चिनका विच भएको सम्झौताका कारण बल्झिएको हो । भारत र चिनको उक्त सम्झौतामा व्यापारीक मार्ग लिपुलेक हुने कुरा उल्लेख गरिए पछि यो विवादमा चिन पनि तानिएको छ ।
-केहि हप्ता अगाडी भारतले प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको सम्पुर्ण कालापानी क्षेत्रआफ्नो नक्सामा राखेकोले विवादले उग्ररुप लिएको छ । तर सडके विरोध बढि, कुटनैतिक पहल सुन्य ।
-आर्थिक तथा रणनैतिक सबै पक्षबाट कालापानीको महत्व बढदै गएको छ । भारतले पनि त्यस क्षेत्रमा अड्डा जमाई बसेको दसकौ भइसक्यो । अहिले सुटुक्क छोडेर जानु पनि उसकै अन्तराष्ट्रिय राजनितिमा ठुलै बेइज्जत हुन सक्छ । त्यसैले भारत हरतरहको नक्कली विवाद सिर्जना गरेरै भएपनि कालापानी आफ्नो बनाउन तत्पर छ । यसको लागी उसको सामथ्र्यले भ्याएसम्म गर्नेछ । तर नेपालको पक्षमा यथेष्ठ प्रमाणहरु भएका कारण नेपालले दरो संग भारतसंग वार्तागरेमा यो समस्या सुल्झाउन गाह्रो पर्दैन ।
मनन गरौ (केहि प्रश्नहरु)
१, अहिलेको कालापानी विवाद भारतले प्रकाशित गरेको यस वर्षको नयाँ नक्साका कारण हो या कुनै प्रायोजित सडके हुलदंगाको लागी मात्र हो?
२, कालापानी विवाद नेपालको पुरानो मध्येको सबैभन्दा ठुलो र महत्वपुर्ण क्षेत्रको सीमाविवाद हो । विगतका सरकारहरुले के गरे ?
३, नेपालको सीमाविवाद फगत राष्ट्रवादको परिचय दिनका लागी मात्र हो या वास्तविक समस्या ठानि यसको समाधान र दिर्घकालिन भलाईको बाटो कुन महत्वपुर्ण हो ?
४, नेपाल सरकारले नै आफ्नो आधिकारीक निसान छापमा कसरी र के कारणले गल्ती बनायो ।? यसको दोसी को हो ?
५, नेपाल सरकारले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षरकर्ताको नाम र पद लेख्न किन डराएको ? भारतसंग तत्काल वार्ताको आव्हान किन नगरेको । विज्ञ टोलिलाई सीमा क्षेत्रमा किन नखटाएको ? कुटनैतिक पहल कदमी सुन्य र दुतावस घेर्ने कुरा समस्याका समाधान हो ?
६, समस्या नेपाल र भारतविच छ तर आन्दोलनकर्ताहरु पाकिस्तानको दुतावास गएर भारत मुर्दावाद र पाकिस्तान जिन्दावाद भन्नुको तात्पर्य के हो ?
७, भारतसंग सीमा विवाद लगायत दजर्नौ समस्या हरु छन, उदाहरणका लागी नदि कटानका लागी बनाइएका बाध, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्कर र कालोबजारी, अपराधिक गतिविधी अदि विषयमा चाहि ध्यान दिनु पर्दैन ?
८, भारतले सीमाना मिच्नुमा उसंगको सबै सम्बन्ध खत्तम भयो भनेर मिडिया वाजी र वहसले दिर्घकालिन रुपमा नेपाललाई फाईदा पुग्छ या हानि ? भारतिय सीमा विवाद भएको समयमा उग्रराष्ट्रवाद तर भारतिय परनिर्भरताको हल गर्ने विषयमा किन बहस पैरवी हुदैन ? भारतियलाई कुटनु , अपमान गर्नु समस्याको समाधान हो ?
९, भारतिय दुतावासबाट दशैमा रक्सी उपहार लिने पत्रकारहरुबाट यो विषयमा गहन ढंगले विषय उठान हुन्छ भनेर आश गर्ने आधार के छ ? भारतिय दुतावसको आशिर्वाद र सहयोगमा नेता मन्त्री भएका, श्रीमती र छोराछोरीलाई शैक्षिक लगायत विभिन्न सहयोग पाएका नेतामन्त्रीहरुबाट कालापानी लगायत मिचिएका हरेक क्षेत्रको समस्या समाधान होला भनेर कुन आधारले आशावादी हुन सकिन्छ ?
हाम्रा महान पुर्खाहरुले अत्यन्त दुःख कष्ट गरी यो देश जोडेका हुन । हाम्रा हरेक डाडाँ र सीमानाहरुमा महान पुर्खाका रगत पसिनाले भिजेको छ । एक इन्च पनि भुभाग वैरिको हातमा पर्न दिनुहुन्न भन्ने पुर्खाहरुको उपदेश थीयो । र एक नेपाली गोठालोको छिमेकी जनताबाट हत्या हुदाँ युद्ध छेडने जंगबहादुरका सन्तान हौ हामी । “विदेशीहरु हाम्रा मुलुकमा पस्या भने कंगाल बनाई छाड्न्याछन" भन्ने पृथ्वीनारायण शाहका प्रजा हौ हामी । इतिहासमा नेपालले युद्ध हार्दा हारेको अनुहार लिइ बाच्नुभन्दा जिन्दगीभर वैरिका विरुद्ध लडेरै मर्छु भन्ने बलभद्र कुवरका भतिज/भतिजी हौ हामी । सगौली सन्धी हुने भएपछी त्यसको पिडा सहन नसकेर काठमाडौ नै नफर्की गोसाइकुण्डमा पुस माघको जाडोमा ध्यानमग्न भई समाधी लिने अमरसिहं थापाका छोरा/छोरी हौ हामी । र ७२ वर्षको उमेरमा देशका निमित्त युद्धमैदानमा वैरिका शिर छिनाल्न अघिसर्ने हजुरबुबा भक्ति थापाको नाती/नातीना हामी । र जम्मा ६०० जना नेपाली गोर्खाली ले शत्रुपक्षका ४०० सेनालाई हायक कायल पारेका पुर्खाका सन्तती हामी । समग्रमा हामी महान र देशभक्त पुर्खाको सन्तान तर वर्तमानमा इतिहासकै कायर र नामर्दहरुको परिचय पाएका अधर्मीहरु हौ हामी ।
के आज कालापानीमा सीमाना अतिक्रमण भैरहदा हामिमा पुर्खाको जस्तो देशप्रेमले ओतप्रोत भई त्यसको रक्षाको निमित्त उत्रन सक्ने सामथ्र्य छ ? हाम्रो सडके राष्ट्रवाद र दुतावसको रक्सीमासुको भोजले डकारेका नेताहरुको त्यो साहस छ ?
कवि माधव प्रसाद घिमिरेको गित गाउँछ गित नेपालीको हरफ
पश्चिम किल्ला कागँडा पुर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौ,
कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौ,
गाउदै हुर्किएका हामी । कुनै समय भारतिय दुतावासकै दवावमा यो पंक्ति हटाउने दुस्साहस समेत भयो, (अभियान्ता फणिन्द्र नेपाल) । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक “नेपालको सीमानाले” मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएपछि सो निर्णयका बिरुद्ध पनि भारतिय दुतावासले निकै ठुलो कसरत गर्याे (पुस्तकमै उल्लेखित) । भारतको यो तहको घृणित कार्यलाई पनि मनन गर्नै पर्छ ।
यस लेखमा प्रयोग भएका सीमाना सम्बन्धी तथ्यांकहरु सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ग्रन्थबाट लिइएको हो ।